UKenneth Ize wenza ityala lakhe kwiVeki yeFashoni yaseParis AW20
Tyena IVeki yeFashoni yeParis Fall / Ebusika i-2020 isizini, ethathe ngoMvulo, igcwele ngokupheleleyo kwaye iNigeria ilungele ukunxiba imfashini engaziwayo, Kenneth ngoko- Wazisa imicu enemibala kwindlela yokubaleka njengoko esenza ibanga lakhe le-PFW ngoMvulo.
Kwiveki yakhe yokuqala yeParis yeFashoni ka-2020, uKenneth Ize ojonga uNahomi Campbell isitixokazi sakhe njengoko ebeyinxalenye yokukhula kwakhe, wazisa isivumelwano esitsha sobomi kwimibala ethandekayo kunye nezinto ezityebileyo Ilaphu leAso Oke. Ingqokelela eneempawu zoyilo eziphefumlelweyo zomsebenzi kunye neziqwenga ze-androgynous ikwabonisa neengxowa zebhakethi ezimdaka kunye neziqwengana ezenziwe ngokubambisana nezixhobo ze-Austrian ilebheli yeSagan.
Kudliwanondlebe noVogue, uKenneth Ize, okwangumgqatso wamabhaso we-LVMH ka-2019 ubenokutsho:
“Ndizame ukucamngca ngexesha laxa mna nosapho lwam sasise-Afrika nendlela izinto ezatshintsha ngayo ngequbuliso xa safudukela eYurophu. Umama wayeka ukunxiba iimpahla zaseAfrika mihla le, wayenxiba zona kuphela ngeCawa. NgoMvulo, wayesiya emsebenzini enxibe iimpahla zenkampani kwaye abe ngumntu owahlukileyo ngokupheleleyo. Wayesoloko elangazelela iiCawa kuba yayilixesha kuphela awayeza kuvakalisa ukuba wayevela phi kunye nesiko lakhe. ”
Usebenzisa umgca up obandakanya ezinye zeemodeli ezithandwayo zaseAfrika nezimnyama kubandakanya Imaan Hammam, UAlton Mason, UMayowa Nicholas, Adwoa Aboah kwaye Ugbad Abdi, umyili wase-Austrian-Nigerian ucofe isupermodel NoNaomi Campbell Ukuvala umboniso kwisinxibo esinombala oqinileyo wokuphapha eshafini.
Nazi i-10 zoyilo zethu ezithandekayo ezivela kwiqoqo lakwaKenneth Ize AW20…
Bukela umboniso weKenneth Ize PFW AW20 apha…
Kenneth ngoko- Kenneth Ize PFW AW20 IVeki yefashoni yeparis IVeki yefashoni yaseParis 2020 IVeki yeFashoni yaseParis AW20 IVeki yeFashoni yaseParis uKenneth Ize iDebut I-PFW AW20
Uhlobo Rave Februwari 26, 2020
Ukudlalwa kweendaba zeRave: I-Netflix Naija iqala ngokusesikweni, iNkundla ePhakamileyo igxotha isicelo sikaVavanyo se-APC, uMaria Sharapova Retires + Okungakumbi